Nkwupụta nke Day: Mgbatị Ntachi Obi | EKPERE NA OZI
Udo nke ụbọchị: gosipụta nnọgidesi ike
Paolo Tescione	Edere ya November 20, 2020 November 20, 2020
Ọ dị mfe ịmalite. Ọ bụrụ na ịmalite zuru ezu ịbụ ihe dị nsọ, ọ nweghị onye a ga-ewepụ na Paradaịs. Nye na ọnọdụ ọ bụla nke ndụ na-adịghị enwe oké ịnụ ọkụ n'obi? Onye n’ebidoghi ibu onye nso mgbe ufodu? Onye na-ebido n’ekpere? Kedu onye na-anaghị ekwupụta omume ofufe? Onye na-ekweghi onye nkwupụta ahụ ezi nkwonkwo ezi obi? Gi onwe gi kwa cheta oge amara gi, nkwa gi. Ma olee ikwesị ntụkwasị obi gị iji mezuo ha?
O siri ike ịnọgidesi ike. Afọ ole, ma ọ bụ karịa, ụbọchị ole ka anyị jigidere na omume ọma, na omume nke okpukperechi, na nkwa? Lee ọsọ ọsọ ahụ gafere! Ọ bụghị otu ihe bụ otu nsogbu gị? Enwere ihe mgbochi atọ ma ọ bụ ndị iro nke nnọgidesi ike; 1 Celsius Oge, nke na-erepịakwa ihe niile; ma ị merie ya site na ịmalite ụbọchị ọ bụla. 2 ° Ekwensu, ma gi luso ya agha mara na obu onye iro gi. 3 ° zdị umengwụ ebumpụta ụwa dị n'ime gị, mana ị na-eche maka hel ịgbapụ na Paradaịs iji nweta.
Naanị nnọgidesi ike n'ihe ka a ga-akwụghachi ụgwọ. Jizọs kwuru, sị: Ọ bụghị onye malitere, kama ndị na-anọgidesi ike na a ga-azọpụta. Onye obula nke tukwasiri aka ya na ihe ubi ma leghachi anya n’Eluigwe. I bu asusu a? Kedu ihe ga-aba uru ijegharị nke ọma afọ 50, wee laa n'iyi? Kedu ihe ọ ga-aba uru bido otu narị ugboro, ma agaghị azọpụta gị? Jiri uzo obula iji dobe onwe gi; na-echeta okwu nke St. Mụrụ anya na ikpe ekpere.
OMUME. - Atọ nyeere Jisos inwe ntachi obi.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na Jizọs chọrọ iji nweta ọcha nke Churchka ya
Next Post → Post ozo:Gini bu nmehie megide Mo Nso?